Taliska Mareykanka ee Africa oo sheegay in 52 Al-Shabaab ku dileen duqeyn
Sagal Radio Services • News Report • January 20, 2019
Taliska Mareykanka ee Africa ayaa war ka soo saaray duqeyntii maanta ka dhacday Gobolka Jubadda Hoose, kaasoo lagu dilay dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab, kaddib markii ay weerareen Saldhig Ciidamada dowladda iyo kuwa Jubbaland ku lahaayeen Baar Sanguuni.
Mareykanka oo shuruud ku xiray ka qaadida cunaqabateynta saaran Kuuriyada Waqooyi
Xoghayaha Arrimaha Dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa sheegay in cunaqabateynta saaran dalka Kuuriyada Waqooyi aan laga qaadi doonin, inta ay ka burburineyso hubka Nukliyeerka ah.
Dibadbaxyo ka dhan ah Trump oo ka dhacay gudaha iyo dibada dalka Mareykanka
Bannaan baxyo badan ayaa ka dhacay walina ka socda qeybo ka tirsan dalka Mareykanka kuwaasoo looga soo horjeedo siyaasadaha qallafsan ee madaxweynaha shalay Mareykanka loo dhaarshay Mr. Donald Trump.
Safiirka Mareykanka “11-kii kursi ee Guddigu laalay, kuma jirin kuraastii xadgudubka loo adeegsaday”
Safiirka Mareykanka u fadhiya Soomaaliya Stephen Schwartz ayaa ka hadlay qaabka ay u socdaan hanaanka doorashada, caqabadaha ka jira iyo aragtida Mareykanka ka qabo doorashooyinka.
Mareykanka oo sheegay inuu bartilmaameedsaday Sarkaal sare oo ka tirsan Al-Shabaab
Wasaaradda Difaaca Mareykanka ayaa sheegay in weerarkii cirka ahaa oo Sabtidii la soo dhaafay ay diyaarad kuwa aan duuliyaha laheyn ka fulisay Koofurta Soomaaliya lagu bartilmaameedsaday Sarkaal sare oo ka tirsan Al-Shabaab.
Shirka Mareykanka iyo Afrika oo maanta Furmaya
Shirkan ay kukulmayaan madaxda qaarada Africa iyo madaxaweynaha mareykanka brack obama kana dhaca magaalada washighton ayaa waxaa looga hadli doonaa waxyaabo dhowr ah sida maal galinta qaarada Africa iyo amaanka qaarada Africa .
Maraykanka oo ka Hanbalyeeyay Doorashadii Puntland
Afhayeenka wasaarada arimaha dibada Mareynkanka ee Africa u qaabilsan Will Stevens, ayaa war uu soo saaray wuxuu ku sheegay in Dowlada Mareynkanka ay soo dhaweyneyso Doorashadii sida dimuqraadiyada ah ay ku dheehan tahay ee shalay ka dhacay Puntland,kaasi oo lagu doortay hogaamiyaha cusub ee C/wali Maxamed Cali Gaasi.